ဘုမသိ ဘမသိ – Grab Love Story
ဒီလို ဗျ ကျော်စွာတယောက် ဘန်ကောက်မှာ ယိုးဒယားမလေးတစ်ပွေနဲ့ချိတ်တိတ်တိတ်ဖြစ်တော့ ကောင်မလေးက (လိုင်းချက်) ပဲသုံးတာဆိုလို့ သူလဲလိုင်းလိုက်သုံးပြီး နောက် လျှောက်အပ်ရင်း အသိမိတ်ဆွေတွေများလာပြီး ကျော်စွာတစ်ယောက် လည်လည်ဝယ်ဝယ်ရှိလာသည့်နောက်ပိုင်း ပထမတော့ အဲ့ယိုးဒယားမလေးနဲ့ချိတ် သူ့သူငယ်ချင်းတွေကိုချိတ် ပွားရင်း ပွားရင်းနောက် တဖြည်းဖြည်း ချိတ်မိသည့်အထဲ လူစုံပါလာသည်။ အဲ့သလိုနဲ့ ကောင်မလေးတွေရော ကောင်မကြီးတွေပါရှာဖွေစားသောက်ခဲ့ပြီးသည့်နောက် ချွန်ပူးဆိုသည့် မမကြီးတစ်ပွေနှင့်ချိတ်မိတော့သည်။
ဘန်ကောက်ဘဏ့်မှာလုပ်နေတာ၊ အသက်က ၃၃၊ ရုပ်က ကတယ့်ဆက်ဆီ၊ ခါးနဲနဲတုတ်ပေမဲ့ ဘော်ဒီကလဲအမိုက်စား။ အဲ့တော့အသေချွေပီပေါ့။ အဲ့တုန်းက သူ့အသက် ၂၄ ဆိုတော့ မမကြီးတွေဆိုအသေခိုက်တာ၊ အ့ဒါ တွေပဲခံတွင်းတွေ့နေသည့်အချိန်။ ချွန်ပူးနဲ့ အပြင်မှာဒိတ်တော့ ပထမကော်ဖီဆိုင်မှာတွေ့ပြီး အိမ်မှာဘီယာသွားသောက်မယ်လို့ဆော်ကြီးကစပြောလို့ အခန်းကိုပဲပင့်လာခဲ့လိုက်တယ်။ စကားပြောရင် ကြာလေးအချွဲလေးနဲ့ပြောတာကိုလဲသူခိုက်သွားတယ်။ လိုင်းမှာကတည်းက တော်ကီတော်တော်ချွေခဲ့ပြီးပြီမို့ အိမ်ရောက်တော့ ခပ်ပါးပါးတွန်းပြီး ဘီယာတစ်ပုလင်းကုန်တာနဲ့ ချွန်ပူးကို လှကြောင်းပကြောင်း ဆက်ဆီကျလိုအရမ်းတက်မက်မိကြောင်း ပြောပြီးဖက်နမ်းလိုက်သည်။ ဆော်ကြီးကမျှော်လင့်ထားတဲ့အတိုင်း အနမ်းပြင်းပြင်းတွေနဲ့ပြန်နမ်းတော့ နှစ်ယောက်သား လိုချင်တာတူသွားပြီ။ စတွေ့ကတည်းက သရေယိုနေတဲ့နို့တွေကိုဖွဖွလေးညှစ်ပေးပြီး အင်္ကျီတွေချွတ်လိုက်တော့လဲအမိုက်စား ဘော်ဒီနဲ့၊ အကျီင်္ိနဲ့ကတည်းက ထင်းနေတဲ့နို့နှစ်လုံးက အင်္ကျီလဲချွတ်လိုက်ရော ဘိုကျော့်လက်ထဲခုန်ပေါက်ကျလာတော့မလို၊ ဇာဘရာလေးကိုမနိုင်ဝန်ထမ်းခိုင်းထားသည်။
ဝေါင်း မင်းနို့တွေက လှလိုက်တာ ချွန်ပူးရယ် ယူကြိုက်လား . . . အင်း လုံးတင်းနေတဲ့နို့အုံကြီးက အကြည်ရောင်ဇာဘရာလေးထဲမှာပိုစိတ်လှုပ်ရှားစရာမို့ ဘရာကိုမချွတ်တော့၊ အပေါ်ကဇာစလေးတွေပဲဖယ်ပြီး နီညိုနို့သီးခေါးလေးကိုဖွဖွလေး စို့ပေးလိုက်တယ်။ အင်း . . . ဒီလောက်တင်းပြီး ဒီလောက်ကိုင်လို့ကောင်းကတည်းက ဆီလီကွန်ဆိုတာသိလိုက်ပြီ။ ဒါကအရေးမကြီး ကျန်နေတဲ့စကပ်ကိုမတင်၊ ပင်တီလေးကိုဆွဲချွတ်ပြီး အိမ်ရှေ့ခန်း ဆိုဖာပေါ်မှပင်မှုတ်ပေးဖို့ သူမစောက်ဖုတ်ကိုနမ်းလိုက်တော့ အနံမွှေးမွှေးလေးတစ်ခုရသည်။ အိမ်ကိုရောက်ရောက်ခြင်း အိမ်သာမေးပြီး သွားဆေးလိုက်တာဖြစ်ရမည်။ ( ရွှေညီမတွေလဲ စာဖတ်ရင်း အတုယူစရာရှိရင် ယူပါနော် ဖြူဖွေးပြီးအမွှေးပါးပါးလေးနဲ့စောက်ဖုတ်ကြီးကို အသာငန်းငန်းယက်ပေးတော့ သူ့ဆံပင်တွေကိုဆွဲပြီး သူမစောက်ဖုတ်ကြီးနဲ့ဆွဲကပ်တယ်။ ၏
ချွန်ပူးလဲထန်နေပြီမှန်းသိတော့ သူသိပ်အချိန်မဖြုန်းချင်၊ ကုန်းမှုတ်နေရာကထပြီး ဘောင်းဘီဆွဲချွတ်လိုက်တော့ ဖျောင်းခနဲထွက်လာတဲ့သူ့လီးကြီးကိုကြည့်ပြီး အားရတဲ့ပုံစံလုပ်ပြပြီးကုန်းစုပ်တော့တာပဲ။ ကိုယ်လဲသူ့နှုတ်ခမ်းဖူးဖူး အာခေါင်နွေးနွေးကြောင့် လိုးချင်လာပြီ။ ဆိုဖာခုံပေါ်မှာပဲ သူ့ကိုကားထိုင်ခိုင်းပြီး စောက်ခေါင်းညိုညိုလေးထဲ လီးထိုးထည့်လိုက်တယ်။ သူထင်ထားတာထက်ပိုကျပ်နေတဲ့စောက်ပတ်လေးမို့သူသဘောကျသွားပြီး သူ့ဆိုဒ်နဲ့စည်းစည်းပိုင်ပိုင်ရှိသဖြင့် ဆောင့်လို့သိပ်အရသာရှိသည်။ ချွန်ပူးကလဲ အောက်ပေးသိပ်ကောင်းတဲ့မိန်းမ၊ ယိုးဒယားမတွေရဲ့ စကေးကမသေး။ မျက်လုံးရွဲကြီးတွေနဲ့ ကြာကလဲပေးတက်သေးသည်။ ကျော် မင်းသိပ်လိုးတက်တာပဲ အချစ်ရယ် အင်း ဟုတ်တယ် လိုး . . . လိုး မေလိုးလေး လိုးတက်လိုက်တဲ့ ကောင်လေး၊ ဒီလိုလိုးပေးကွာ အွန့် ဆိုပြီး ကုန်းပေးတယ်။
အဲ့ဒါကြောင့် မမကြီးတွေကိုကြိုက်တာ၊ ဆဲပြီး ညစ်ညစ်ပတ်ပတ်တွေပြောနေတော့ အားနာစရာမလို။ ကိုယ့်တွေဘာကြိုက်လဲဆိုတာလဲသိသည်။ ကောင်းလား ကျော် ဟင် မင်း အိုကေ လား အား . . . ကောင်းတယ် ချွန်ပူး မင်းဖင်ကြီးက သိပ်လှတာပဲ မင်းလိုးတာကိုခိုက်နေပြီနော် ငါ့နှုတ်ခမ်းကိုနမ်းပါဦး င့ါနို့တွေကိုဆွဲ ဖြန်း . . . ဖြန်း . . . အား အ ဆောင့်လိုးလိုက်တိုင်း တုန် တုန် သွားတဲ့ ချွန်ပူးဖင်သားကြီးတွေကို အားမလိုအားမရ ရိုက်လိုက်သေးသည်။ ဖင်သားဖြူဖြူကြီးတွေမှာ သူ့လက်ရာကြီးတွေထင်းလို့ အား ကြိုက်တယ် ရိုက် ရိုက် မေလိုးလေး လိုးတက်လိုက်တာ အား ငါပီးတော့မယ် ကျော် အား အား ဟုတ်တယ် သိပ်ကောင်းတာပဲကွာ မင်းလီးကိုချစ်တယ် အား အား တခုသတိထားမိတာက စောက်ခေါင်းကအရမ်းမကျပ်ပေမဲ့ အထဲကစုပ်အားကရှယ်၊ ပီးခါနီးမို့ အသေညှစ်တော့ သူမပီးအောင်အတော်ထိန်းဆောင့်ပေးနေရသည်။
ခနကြာတော့ သူ့လီးကိုနွေးခနဲဖြစ်သွားအောင်ချွန်ပူးတယောက် အချစ်ရည်တွေနဲ့ပက်ဖြန်းလိုက်တော့သည်။ အား ကောင်းလိုက်တာကျော်ရယ် . . . အရမ်းကောင်းတာပဲ ဒီလိုမပြီးရတာကြာပြီ မင်း မပီးသေးဘူးမဟုတ်လား လာ ဒီမှထိုင်လိုက် ဆိုပြီး သူမဘေးကဆိုဖာပေါ်ပုတ်ပြသည်။ သူဝင်ထိုင်လိုက်တာနဲ့ သူ့အပေါ်ခွကာ တက်ဆောင့်တော့ အဖုတ်ထဲမှာနွေးနေတုန်းရှိသေးတယ်။ လီးတချောင်းလုံး စောက်ဖုတ်ထဲဝင်သွားတော့ ဆောင့်လိုက် ပွတ်လိုက်နဲ့မို့ သူ့မျက်နှာရှေ့မှာခါနေတဲ့ ချွန်ပူးနို့ကြီးကို အားရပါးရ စုပ်ကိုင်ပြီးအောက်ကနေပြန်ကော့လိုးနေမိသည်။ စို့ကျော့် ငါ့နို့တွေကိုစို့ပေး ငါကြိုက်တယ် အား မင်းလီးကြီးက ငါ့စောက်ဖုတ်ထဲ အပြည့်ဘဲကျော် ကောင်းလိုက်တာ ချွန်ပူးရယ် ငါ့ကိုလိုးပါ ငါပီးချင်ပြီ လိုး လိုး ကိုယ့်နားနားကပ်ချွဲနေတဲ့ချွန်ပူးက အားနဲ့ဆယ်ချက်လောက်ကပ်ဆောင့်လိုက်ပြီး သူ့ရှေ့မှာဒူးထောက်ချကာ သူ့လီးကိုကုန်းစုပ်တော့သည်။
ခနနေတော့ အစုပ်ရပ်လိုက်ပြီး နီရဲဖူးရောင်နေတဲ့ သူ့လီးကြိးကိုနို့တွေနဲ့ပွတ်ပေးပြီး နို့်ကြားထဲညှုပ်ကာ ထုပေးလိုက်တော့ သူ့လရေတွေပန်းထွက်လာတာ သူမနို့အုံတွေပေါ်ရော မျက်နှာတွေပါစင်သွားသည်။ ရေချိုးခန်းထဲဖင်တုံးလုံးနဲ့ သန့်ရှင်းရေးသွားလုပ်တော့ သူ့လီးကြီးကသိပ်မကျသေး။ ပြန်လာတော့ ရေခဲသတ္တာထဲကဘီယာနှစ်ပုလင်းထပ်ယူလာကာ ဘေးနား ဝင်ထိုင်ပြီး သူ့နှုတ်ခမ်းကိုနမ်းရင်း . . . အရမ်းကောင်းသွားတယ်ကျော် မင်းရော ငါလုပ်ပေးတာဘယ်လိုနေလဲ သိပ်ကောင်းတာပေါ့ ချွန်ပူး မင်းကလှလဲအရမ်းလှတယ် လိုးတာလဲတော်တယ် ငါကမချွတ်တန်းတောင်လိုးချင်တာ တကယ်လားကျော် တကယ်တွေ့ကြမလား ငါ့အိမ်လာလည်လေ၊ ငါ့လင်တော့ရှိတယ်နော် ခ် ကျော်စွာက စော်နဲ့ဒိတ်ရင် ဘဲရှိလား ယောင်္ကျားရှိလားဘယ်တော့မှမမေး၊ သိရင်စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်လို့။ ဒီအသက်အရွယ် ဒီအလှအပနဲ့ Single မဖြစ်နိုင်မှန်းသူသိပါသည်။
အခုယောင်္ကျားနဲ့အတူနေတာဆိုတော့ ပိုထန်မိပေမဲ့ နဲနဲတော့ဘာပြောရမှန်းမသိဖြစ်သွားသောသူ့ကို ချွန်ပူးက နားနားကပ်ခါ ဘာမှမပူပါနဲ့ကွာ သူကဘာမှမသိပါဘူး ငါမင်းလိုးတာပိုကြိုက်တယ် ( မပျော့မမာဖြစ်နေတဲ့ လီးကို သူ့လက်သည်းရှည်တွေနဲ့စွပြီး) ဘာလဲလင်ရှိတယ်ဆိုတာနဲ့မင်းကငါ့ကို မလိုးချင်တော့ဘူးလား မဟုတ်ပါဘူး ငါလဲမင်းလိုမျိုးပဲ ခိုးစားရတာကြိုက်ပါတယ်၊ မင်းမှာလင်ရှိတယ်ဆိုတော့ ပိုတောင်ထန်သွားသလိုဘဲ ပြဿနာတော့မရှိပါဘူး နောက်တခါငါ့အခန်းမှာတွေ့လို့ရတာဘဲ နိုး နောက်တခါငါ့အိမ်မှာတွေ့မယ် ခုတော့ ဒီမှာပဲ နောက်တခါကြတာပေါ့နော် ငါ့ပူဆီလေးကတော့ ရယ်ဒီဖြစ်နေဘီ အွန်း ဟွန်း ကျော့်စွာ့လီးကိုကိုင်ကစားရင်း လည်ပင်းတွေ နို့သီးလေးတွေကို နမ်းပြီး လျှာနဲ့ယက်ပေးနေတော့ လက်ထဲဘီယာကိုအကုန်မော့ချလိုက်ပြီး ချွန်ပူးကိုကောက်ချီကာ အခန်းထဲက ကုတင်ပေါ်ခေါ်သွားလိုက်တော့တယ်။ တပတ်နှစ်ခါလောက်သူ့အခန်းမှာချိန်းလိုးဖြစ်ကြပြီး တလလောက်ကြာတော့ တစ်ညနေ ချွန်ပူးဆီကဖုန်းဝင်လာသည်။
ဟေး ကျော် မတွေ့တာကြာပြီ မင်း ဒီညနေအားလား ပြောချွန်ပူး အင်း . . . ဒီညနေ . . . အားပါတယ် မင်းလာခဲ့မလို့လား နိုး မင်းလာခဲ့ရမှာ မင်းအတွက် လက်ဆောင် တစ်ခုရှိတယ် ၇နာရီလောက်လာခဲ့နော် ငါ လိပ်စာပို့ လိုက်မယ် ဖုန်းချပြီးတော့ ကျော်စွာကြောင်နေမိသည်။ ဒီနေ့သူ့မွေးနေ့လဲမဟုတ်၊ ဟုတ်ရင်တောင်ချွန်ပူးမသိ ပြီးတော့သူ့အခန်းမဟုတ် သူ့ယောင်္ကျားရှိတယ်လို့ပြောထားတဲ့ ချွန်ပူးအိမ်မှာ၊ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ညနေအတွက် အကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ခဲ့ရတော့တယ်။ ညနေ ၇နာရီ၊ ချွန်ပူးတို့အိမ်ရောက်တော့ လင်မယားနှစ်ယောက်လုံးထွက်ကြိုကြသည်။
ချွန်ပူးက သူ့ယောင်္ကျားရှေ့ကအရင်ထွက်လာပြီး မျက်စိတစ်ဖက်မှိတ်ပြကာ “ ဟက်ပီးဘက်ဒေး ကျော်” ဆိုတော့ သူကြောင်သွားပေမဲ့ ခပ်တည်တည်နဲ့ သိုင်းကျူးဘာညာလုပ်တုန်း သူ့ယောင်္ကျားက လက်ဆောင်တစ်ခုလာပေးတယ်၊ နောက် သူ့မိန်းမကိုကူညီပေးလို့ကျေးဇူးတင်တဲ့အကြောင်းတွေပြောတော့မှ ချွန်ပူးလုပ်ဇာတ်ကိုနားလည်သွားပေမဲ့ ဘာကြောင့်မှန်းမသိရသေး။ ဖိခရောက်ဆိုတဲ့ သူ့ယောင်္ကျားနဲ့မိတ်ဆက်ပေးရင်း ဘီယာအတူသောက်ရင်းနဲ့ နဲနဲအာသွက်လာတော့ သူ့မိန်းမကိုအရမ်းချစ်တဲ့အကြောင်း၊ ချွန်ပူးပျော်မယ်ဆိုရင် ဘာမဆိုလုပ်ပေးမည့်အကြောင်းတွေပြောလာတော့ ခိုးစားဖူးတဲ့သူ မျက်နှာပူသလိုပင်ဖြစ်ရသည်။ ချွန်ပူးကိုကြည့်လိုက်တော့လဲ သူယောင်္ကျားနားမှာသာထိုင်နေတာ ပြုံးပြီးကြည့်ကိုက တကယ့်ကိုကျေနပ်နေသလို၊ ခုပြန်စဉ်းစားတော့မှ လင်ကြီးဘေးထိုင်နေရင်း လင်ငယ်ကိုထန်ပြီးကြည့်နေရတာ ကျေနပ်နေပုံရသည်။
ခနနေတော့ ဘီယာကုန်သွားသည်။ ခဏလေး ကျော် ဘီယာထပ်သွားဝယ်လိုက်ဦးမယ် ဟာ မဟုတ်တာ ဖိခရောက်နေပါ ကျနော်သွားဝယ်လိုက်မယ် နေ နေ ဒီနားတွေမင်းမသိဘူး ဖိသွားလိုက်မယ် ဘီယာဝယ်ရင်း ကြက်ကင်ပါဝယ်ခဲ့မယ် နောင့်ချွန်ပူး ကျော်ပျင်းနေဦးမယ် ဂရုစိုက်လိုက်နော် ဆိုပြီး ကားမောင်းထွက်သွားတော့ . . . . . ပြုံးပြုံးကြီးထိုင်နေတဲ့ချွန်ပူးက ဘေးနားလာထိုင်ပြီး သူ့ကို နမ်းတယ်။ မင်းလန့်နေတာလား ကျော် ခ်ခ် အင်း နဲနဲလန့်နေတယ် င့ါမွေးနေ့မဟုတ် . . . ငါသိတယ်ကျော် . . . မင်းကိုတွေ့ချင်လို့ ဒီအိမ်မှာတွေ့ချင်တာ ဒီမှာ ( သူမျက်လုံးပြူးလာသည်) ဟုတ်တယ် ဒီမှာ လေးလိုးရအောင် ကျော်၊ ငါဆာနေပြီကွာ ခဏနေ ဖိခရောက်ပြန်လာရင် . . . ( သူ့စကားပင်မဆုံးလိုက်) ညုတုတုလေးပြောရင်း လက်ကသူ့ဘောင်းဘီဇစ်ကိုဆွဲချပြီး ငပဲကိုဆွဲထုတ်ကာ ပွတ်ပေးနေတော့ ကျော်စွာလဲ အင်း . . သူ့ယောင်္ကျားမလာခင် ဖီးလ်ယူလိုက်ဦးမယ်လို့တွေးပြီး အဆင်ပြေအောင် ကော့ပေးလိုက်တယ်။ ဆာနေတယ်ဆိုတာဟုတ်လောက်တယ်၊ ချွန်ပူးက လီးနဲနဲမာလာတာနဲ့ ကုန်းစုပ်တော့တာပဲ။
ဧည့်ခန်းထဲ မှာကုန်းစုပ်နေတဲ့ချွန်ပူးရဲ့ ဂါဝန်လေးကိုခါးပေါ်ဆွဲတင်းလိုက်ပြီး ဖွေးအိနေတဲ့ ချွန်ပူးဖင်သားကြီးကို ဖြောင်း ခနဲရိုက်လိုက်တော့ ထပ်ရိုက်အောင် ဖင်ကိုလှုပ်ပြီး စနေသေးသည်။ ထန်ချက်က အဖုတ်မှာလဲ အရည်တွေကို ရွှဲလို့။ ယောင်္ကျားဘီယာထွက်ဝယ်နေတုန်း သူ့ကိုလီးစုပ်ပေးနေတဲ့ အထန်ဆော်ကြီးကို စောက်ရမ်းလိုးချင်လာတယ်။ အား . . . လီးပဲ ကောင်းလိုက်တာချွန်ပူး လိုးရအောင်ကွာ လို့ပြောလိုက်တာနဲ့ စုပ်နေတာကိုရပ်လိုက်ပြီး ဂါဝန်ကလှန်ထားပြီးသားမို့ ပင်တီဂွလေးကိုဘေးတွန်းပို့ပြီး ကျော်စွာ့ကိုတက်ခွတယ်။
အရည်တွေကရွှဲနေတာမို့ လီးတခေါင်းလုံးဝင်သွားတာနဲ့ နှစ်မိနစ်လောက် မနားတမ်းဖိဆောင့်တော့တာ ပဲ။ စောက်ခေါင်းထဲကအသားနုတွေနဲ့ လီးကိုဖိပွတ်နေတဲ့အရသာက အရမ်းထူးနေတယ်။လီးကို ရာဘာသားအပွနဲ့ ပွတ်တိုက်ပေးနေသလိုမျိုးမို့လီးအရေပြားထူတဲ့ ကျော့်စွာတောင် လီးကကျင်တောင်ကျင်တက်လာတယ် ချွန်ပူး ဘာတွေဒီလောက်တောင်ထန်နေလဲမသိ။ ပြီးတော့မှ အင်္ကျီကိုလှန်တင် ဘာရာအပျော့ထဲက ကျွဲကောသီးကြီးကိုဆွဲထုတ်ပြီး ငါ နို့တွေကိုစို့ပေး ကျော့် ငါ့နို့သီးခေါင်းတွေကို အားရပါးရစို့ အင့် အာ အား . . . ပြောရင်း သူ့ခေါင်းကို နို့နဲ့ဆွဲကပ်လိုက်ပြီး သူမထုံးစံအတိုင်း နားနားကပ်ပြီး တိုးတိုးလေး ညစ်ညစ်ပတ်ပတ်တွေပြောပြီး ဖီးလ်ယူတော့တာ။ ဖင်ကတချက်ဆောင့်လိုက်တိုင်း အား လီးကတဆုံးဘဲကွာ ကောင်းတယ်ကျော် မင်းခံစားမိလား ငါ့စောက်ဖုတ်ထဲကမင်းလီးကိုညှစ်နေတာ၊ ပြည့်ကျပ်နေတာဘဲကွာ ငါအရမ်းစိုနေဘီသိလား မေလိုးလေးရဲ့ . . . အင် . . . ဟား . . . လီးကလဲ မာတောင်နေတာပဲကွာ ကြိုက်တယ် . . . သိလားကျော် . . ဖိခရောက်က မင်းလောက်မတောင်ဘူး ငါ့ကိုလိုးရင်းပျော့ပျော့သွားတာ . . . . မင်းလီးမာမာကြီးကိုငါကြိုက်တယ်ကွာ . . . အား ရှီုး အပေါ်ကတက်ဆောင့်ရင်း သူ့ယောင်္ကျားအကြောင်းပြောတော့ ကျော်စွာလီးကပိုမာထန်ရသည်။
အား စ်. . . မင်းလီးလဲ ပိုမာလာတယ်နော် ကျော် . . . ဟိုတနေ့က အိပ်ယာထဲမှာ နင်မလိုးနိုင်ရင် ငါကစ်(လင်ငယ်) ထားမယ်လို့ပြောတော့ သူ့လီးကြီးမာပြီး ငါ့ကိုတက်လိုးတော့တာပဲသိလား . . . ငါလဲမင်းနဲ့ လိုးတဲ့အကြောင်းတွေပြောပြတော့ သူ့လီးကြီးကမာသထက်မာပြီး အသားကုန်လိုးတော့တာပဲ အား . . . ရှီုး . . . မင်းလီးကြီးလဲပိုမာလာတယ်နော် ကျော် မင်းကြိုက်နေဘီလား . . အာ အာ ဗြွတ် . . . ဗြွတ် . . . အား ရှီုး ဆောင့်ပေး ချွန်ပူး ဟုတ်တယ် ငါတို့တင်ပိုမာတာမဟုတ်ဘူး မင်းလဲပြောရင်းစောက်ရမ်းထန်လာတယ်မဟုတ်လား စောက်ရည်တွေစောက်ရမ်းရွဲနေဘီ အထဲကလဲအရမ်းညှစ်နေတာ ဘာလဲ မင်း ငါတို့နှစ်ယောက်လုံးကိုလိုးစေချင်ပြီလား . . . အ အ အ ပြောရင်းတင်းလာလို့ချွန်ပူးဖင်ကို ညှစ်ကိုင်ရင်း အောက်ကနေတဇတ်ဇတ်ပြန်ကော့ဆောင့်ပေးလိုက်သည်။ ဟုတ်တယ် ချွန်ပူးပြောတာတွေကြားပြီး ပိုထန်လာရသည်။
သူထင်တာက ချွန်ပူးညစ်ညစ်ပတ်ပတ်တွေဇာတ်လမ်းလုပ်လျှောက်ပြောနေတယ်ထင်တာ။ အား . . အ ကောင်းလိုက်တာကျော် ရယ် ထိတယ်သိလား၊ မဟုတ်ဘူးကျော် ငါကနှစ်ယောက်လုံး လိုးစေချင်တာမဟုတ်ဘူး၊ နင်ငါ့ကိုတက်လိုးနေတာ သူ့ကိုမြင်စေချင်တာ အား ရှီုး ငါ့နို့တွေကိုဆွဲကွာ . . . အင်း . . . . (ပြောရင်း ဘေးကိုလှိမ့်ချလိုက်ပြီး ပေါင်ကားပေးထားတယ်) ငါ့ကိုဆောင့်လိုးပေးကွာ ကျော် အွန်း ဟုတ်တယ် အာ့မျိုးဆောင့် ဆောင့် အား အ ရှစ် လိုးတက်လိုက်တာကျော်ရယ် . . . မရပ်လိုက်နဲ့နော်ကျော် . . . ဖိခရောက်ပြန်ရောက်နေဘီ သိလား သူရုပ်တရက်ဆိုတော့နဲနဲတော့လန့်သွားပါသည်၊
သို့သော် အဆောင့်ကတော့မရပ်မိ။ သည်လိုဆော်အထန်စားကြီးနဲ့ ကြုံလာတဲ့အတွေ့အကြုံအသစ်ဆန်းတွေကြောင့် စိတ်ကလဲပိုထန်လာရသလို ဆိုဖာပေါ်ကားပေးထားတဲ့ချွန်ပူးကလဲ သူတက်လိုးကတည်းက သူ့ခေါင်းကိုဖက်ထားပြီး နားနားကပ် လျှာနဲ့ယက်လိုက် လေလေးမှုတ်လိုက်နဲ့ စကားတွေပြောနေတာလေ၊ စောက်ခေါင်းထဲကလဲ ညှစ်ချက်ကကြွေစင် မကြောက်နဲ့ကျော် သူကလဲ ဒါမျိုးမြင်ချင်နေတာဖြစ်မယ် ခုတခါးဝကနေချောင်းကြည့်နေဘီ၊ လိုး ကျော် ငါ့ကိုဆောင့်လိုးပေး ငါတို့သုံးယောက်လုံးအရမ်းမိုက်နေကြပြီ . . . အား . . ဟာ . . ( အသံကိုမြှင့်လိုက်ပြီး ) ကောင်းတယ် မေလိုးကျော် ငါ့ကိုလိုး ငါကြိုက်တယ် မင်းလီးမာမာကြီးကို ငါ ကြိုက်တယ်ကွာ . . . .အင်း . . . စောက်ခေါင်းထဲကအရည်တွေရွှဲလာလို့ လိုးလိုက်တိုင်း အသံတွေထွက်နေပေမယ့် ထွက်လာတဲ့အရည်တွေက ဂျယ်လိုစေးပျစ်နေတာမို့ ဆောင့်လိုက်တိုက် ပိုစေးသွားသလို ပြန်ခွါလိုက်ရင်လဲ ညောင်စေးကျသလို သစ်စေးထွက်သလို အရည်ကြည်တွေတန်းနေတက်သည်။
သူဆောင့်လိုက်တိုင်း သူ့ဖင်ကို လက်သည်းရှည်ကြီးတွေနဲ့ ဆွဲကုတ်ပြီး အောက်ကနေပြန်ကော့ပေးနေတာ စောက်ရမ်းလီးကိုထန်စေသည်။ အဲ့လိုအကော့နဲ့ အဆောင့် ကွတ်တိသွားကျရင် အထဲကသားအိမ်ဝကိုလီးထိပ်နဲ့ပွတ်ချေလိုက်သလို တစက္ကန့်လောက် နှစ်ဦးသား ရမ္မက်မီးပွင့်သွားရသည်။ သူ့နားသီးဖျားလေးတွေကိုစုတ်ဖီးလ်ခံနေရင်း ငါ ပြီးချင်ပြီကျော် အာ . . . ဖေလိုးမကြီးကို အသေလိုးသတ်လိုက် လိုး လိုး ကျော်စွာ့ ပုခန်းသားကိုသွားဖြင့်ခဲရင်း မျက်လုံးထွက်ကျမတက် သူတို့ကိုချောင်းကြည့်နေတဲ့ သူ့ယောင်္ကျားကိုကြည့်ပြီး စောက်ရည်တွေပိုလျှံလာခဲ့သည်။
ကျော်စွာ့အနေဖြင့် အပေါက်ဝကိုကျောပေးထားသဖြင့် ဖိခရောက်ချောင်းနေတာကို ဒါရိုက်မမြင်ရပေမဲ့ သူ့ရှေ့ကမှန်ဘီဒိုထဲမှာ တစ်ယောက်ယောက်ချောင်းကြည့်နေမှန်းတော့သိနေရသဖြင့် ရင်ထဲမှာလဲ တဒိုင်းဒိုင်းဖြစ်နေသော်လည်း အောက်ကတဖြောင်းဖြောင်းဆောင့်လိုးတာလဲတာဝန်မပြတ်စေရ။ သူ့မိန်းမကိုလိုးနေတဲ့အချိန် သူ့ယောင်္ကျားကချောင်းကြည့်နေတယ်ဆိုတဲ့အသိ အိုး . . . ထူးထူးဆန်းဆန်းခံစားမှုကြီးကြောင့် လီးကိုပိုမာထန်လာပြီး ဆောင့်ချက်တွေမော်တာတက်ထားသလို အိုး . . ရှစ် ကောင်းလိုက်တာကျော် . . . ငါ့ကိုလိုး ပြီးချင်ပြီ ကောင်းလိုက်တဲ့လင်ငယ်လေး . . . မေလိုးလေး လိုးတက်လိုက်တာ . . . ဟုတ်တယ် အဲ့လိုအားနဲ့ဆောင့် . . . ပီးပြီကွာ . . . ကောင်းလိုက်တာကွာ ယောင်္ကျား နင့်မိန်းမနဲ့လင်ငယ် လိုးနေတာကြည့်ပြီး ဂွင်းထုလိုက်ပါလား . . . အာ . . ပီးပီ ချစ်လေးရယ် ကောင်းလိုက်တာ မရပ်လိုက်နဲ့နော် . . . ရှီုး . . . စောက်ခေါင်းထဲကနွေးခနဲဖြစ်ပြီး သူ့လီးကိုညှစ်ဆုတ်ပေးနေသည့်တိုင်အောင် တအိအိလိုးပေးနေတော့ ချွန်ပူးတယောက်ငြီးငြူမဆုံးဖြစ်နေရတယ်။
ကာမမှုဟာ သူကောင်းကိုယ်ကောင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာ ပြောစရာမလို သူတို့ကောင်းလွန်းလို့ပီးခြင်းဟာ ကိုယ်လဲထပ်တူထပ်မျှကောင်းခြင်းပဲမဟုတ်လား။ အထဲကညှစ်အားနဲနဲလျော့လာတော့ လီးကတဆုံးထည့်ပြီး မွှေပေးလိုက်တယ်၊ အထဲက အရည်ရွှဲနေပြီးသား အသားနုတွေကို ဒစ်ဖူးကြီးနဲ့ပွတ်မိတော့ ချွန်ပူးတယောက်ဇိမ်နဲ့မှိန်းနေရာက ကာမမီးဟုန်းခနဲကတောက်သွားသည်။ သူ့ကိုတစ်ချက်နမ်းရင်း နောက်တချီထပ်လိုးပေးဦး ကျော် မင်းပီးတဲ့အထိနော် ဆိုပြီး ရှေ့က ဆိုဖာစားပွဲပေါ်ကုန်းပေးလိုက်တယ်၊ အသက်သုံးဆယ်ကျော် မိန်းမလှလှဝဝတွေမှာမှရှိတက်တဲ့ ဒင်ပြည့်ကျပ်ပြည့် ဖင်အိုးမျိုးနဲ့ အဲ့ကြားက ပြူးထွက်နေတဲ့ ခုနကမှသူလိုးထားလို့နီရဲဖူးရောင်နေတဲ့ စောက်နှခမ်းသားတွေ။ ထပ်လိုးဖို့အသင့်ဖြစ်နေပေမဲ့ ဒီအတိုင်းဆို တခါးဝမှာချောင်းနေတဲ့ ဖိခရောက်နဲ့ မျက်နှာချင်းဆိုင်ဖြစ်သွားတော့မည်။ သူချီတုံချတုံဖြစ်နေပေမဲ့ ရှေ့က ပျားရည်အိုင်ကြီးထဲ ဒိုင်ဗင်ထိုးပြီး သူ့လရည်တွေထုတ်ရဦးမှာမို့ အရှေ့မှာကုန်းထားတဲ့ ချွန်ပူးစောက်ဖုတ်ကြီးကို တချက်လျှာနဲ့ဖမ်းယက်လိုက်တယ်၊ တခါးဝတော့ သူမကြည့်ရဲသေး။ နီရဲပူနွေးနေသေးတဲ့ နှုတ်ခမ်းသားကြီးတွေက တီကောင်ဆားထိ သလို ရွစိရွစိဖြစ်သွားပုံကိုက လိုးချင်စရာ လိုးတော့ကျော် ငါ့ကို ခပ်ကြမ်းကြမ်းလေးလိုး . . . အာ အ . . . ခုနကအားရအောင်တစ်ချီပီးထားတာမို့ထင်တယ် ပြန်ထည့်တော့အဝမှာနဲနဲလေးကျပ်သလိုဖြစ်သွားပေမယ့် ထဲရောက်တော့ပြန်စေးသွားတယ်။
သူလဲအပြီးဆော်တော့မှာမို့ ဖောင်းအိနေတဲ့ ဖင်သားကြီးကို ဖြောင်း ခနဲကတချက်ရိုက်ပီးတာနဲ့ ခါးကိုဆွဲပြီး အသားကုန်ဆောင့်လိုးတော့တာပဲ . . . အရင်က ပက်ပက်စက်စက်အော်ငြီးနေတက်တဲ့ ချွန်ပူးတောင် အသံမထွက်နိုင်တော့။ အိုး . . . သေပါပြီး အား . . ရှီုး . . . ယေင်္ကျားရေ . . . အိုး . . . ငါ့နို့ကိုကိုင်ဆောင့် သူ့လက်တွေကိုဆွဲပြီး သူမနို့အုံးကြီးကိုကိုင်ခိုင်းတယ်၊ မျက်လုံးက တခါးဝမှကိုယ်တစ်ခြမ်းလောက်ပေါ်နေတဲ့သူ့ယောင်္ကျားကိုကြည့်ပြီး ဖီးနေတာ။ သူကြည့်လိုက်တော့ ဖိခရောက်က သူ့မိန်းမကိုတက်လိုးနေတာကိုသြကားကြည့်သလိုမျက်လုံးပြူးကြည့်နေပြီး စိတ်ဆိုးတဲ့ပုံမပေါက်တဲ့ အပြင်လက်ကသူ့လီးသူကိုင်ကာဖိလ်းတက်နေသည်။ တခါမှမခံစားဖူးတဲ့ဖီးလ်ကြီးမို့ဘာလုပ်ရမှန်းမသိပဲ ချွန်ပူးကိုသာဖိဆောင့်လိုးနေမိသည်။ အား . . အ ဖိခရောက်ကိုကြည့်ကျော် သူဖီးအရမ်းတက်နေပြီ မင်း သူ့ကိုပေးလိုးချင်လို့လား ဟင့်အင်း . . . မင်းလိုးတာကိုပြချင်တာ . . . သူ့ကိုကြည့်ပြီးဖီလ်းစေချင်တာ . . . အား . . သူပြောတာတွေနားထောင်ရင် ချွန်ပူးဖင်ကြီးကို ရိုက်ရိုက်ပြီးအားနဲ့ဆောင့်လိုးနေမိတယ်။
ထပ် ပီးချင်လာပြန်ပီကွာ . . . စောက်ခေါင်းထဲကနွေးနွေးလာမှုနဲ့အတူ သူ့လီးလဲပိုထူပိုပွလာသလိုဖြစ်လာသည်။လိုးရတာလဲနှစ်ယောက်လုံးအတွက်ပိုအရသာရှိလာခဲ့ပြီး ကြည့်နေတဲ့ဖိခရောက်ကတော့ ဘောင်းဘီထဲလက်နှိုက်နေပြီ၊ သူလဲကြည့်ရတာပိုထန်လာဟန်တူသည်။ ကြိုက်တယ်ကွာ . . ယောင်္ကျားရေ ကျော့်လီးကပိုကြီးလာတယ်သိလား . . . အိုးဟိုး လိုး လိုး သူ့နို့ကိုညှစ်ထားတဲ့လက်တစ်ဖက်ကိုဆွဲယူပြီး လက်ညှိုးနဲ့လက်ခလယ်ကိုလီးစုတ်သလိုစုတ်ပေးတယ်။ အား . . . သူကိုယ်တိုက်တကယ်လီးအစုတ်ခံရသလိုခံစားရပြီး တကယ်လိုးနေတဲ့လီးက စောင့်အားပိုသွက်သွားတယ်။ သူ့လက်ချောင်းတွေကိုလျှာနဲ့ယက်နေရင်း အွန်း . . . မင်းပီးချင်ရင် ငါ့ပါးစပ်ထဲမှာပီးနော် အား . . အ . . မင်းလရည်တွေမမြိုရတာကြာပြီ မေလိုးလေး လိုး ကွာ အရင်ကချွန်ပူးမျက်နှာကိုပန်းဖူးပေမဲ့ ဒီတခါတော့သူ့ယောင်္ကျားရှေ့မှာပန်းရမှာမို့ စိတ်အလွန်တက်ကြွနေသည်။ အရင်ခိုးစားတုန်းကတောင် ခိုးစားရတာမို့ပိုဖီလ်းလာပြီး အခုလို သူ့ယောင်္ကျားရှေ့မှာ လိုးဆောင့်နေရတော့ ထန်ချက်ကပေါက်ထွက်တော့မည်။
အချက် ၂၀ လောက် ချွန်ပူးဖင်သားကြီးကိုညှစ်ရင်း ဆက်တိုက်ဆောင့်လိုက်ပြီး သူအရမ်းပီးချင်ဘာပြီမို့ဆွဲထုတ်လိုက်တာနဲ့ ချွန်ပူးကအမြန်တပတ်လှည့်ပြီး သူ့လီးကိုလာစုတ်ပေးသော်လည်း မျက်လုံးကသူ့ယောင်္ကျားဆီမှမခွါ. . . သူ့လီးကို တချောင်းလုံးစုတ်လိုက် ဒစ်လေးပဲဖမ်းကိုက်လိုက် ဥတွေပါယက်လိုက် လုပ်ပြနေတာမို့သူကြာကြာသိပ်ထိန်းမနေတော့ဘဲ ငါ ပီးပီ အချစ်ရေ ဟုအော်ကာ ချွန်ပူး ပါးစပ်တွေရော မျက်နှာတွေပေါ်ပါ ပန်းပြီး ပီးပစ်လိုက်ပါတော့တယ်။ လရည်တွေအကုန်ချွန်ပူးမြိုလို့ပီးသွားတာနဲ့ တခါးဝက ဖိခရောက်ပျောက်သွားပါတယ်။ သူတို့ရေချိုးခန်းထဲဝင်သွားပြီးသန့်ရှင်းရေးလုပ်ပြီးပြန်ထွက်လာမှ သူ့ယောင်္ကျားက ခုနကသူတို့လိုးထားတဲ့ ဆိုဖာပေါ်မှာ ဘီယာခွက်တွေနဲ့အဆင့်သင်စောင့်နေပြီး ပြုံးပြုံးရွှင်ရွှင်ကြီးကြိုပါတော့တယ်။ နောက်တော့ ကျော်စွာ့ကို ချွန်ပူးနဲ့သူ့ကိုကျေနပ်အောင်နေပေးလို့ကျေးဇူးတင်ကြောင်း နောက်ဆို တပတ် ၂ရက်လောက် သူတို့အိမ်ကိုလာလည်ဖို့ဖိတ်ပါတော့တယ်။ သူတို့လင်မယားနှစ်ယောက်လုံးလဲ ပျော်ရွှင်ကျေနပ်နေတာကြောင့် ကျော်စွာလဲ လွတ်လပ်ပေါ့ပါးပြီး ငါက ဒီညတောင်မပြန်ချင်သေးဘူး ဆိုတော့ သူတို့သုံးယောက်ရဲ့ရီမောသံတွေနဲ့ အဲ့ညက လှပသွားပါတော့တယ်။ ။ ပြီးပါပြီ။